Macalinka Real Madrid Santiago Solari oo ka hadlay guushii ay ka gaareen Valladolid, muxuuse ka yiri Vinícius Jr? – Gool FM
Macalinka Real Madrid Santiago Solari oo ka hadlay guushii ay ka gaareen Valladolid, muxuuse ka yiri Vinícius Jr?
Dajiye November 3, 2018
(Real Madrid) 03 Nof 2018. Tababaraha ku meel gaarka ah ee kooxda Real Madrid Santiago Solari ayaa isla meel dhigay xidigaha kooxda Real Madrid iyo da’ayarka reer Brazil ee Vinícius Jr.
Santiago Solari ayaa carabka ku adkeeyay in da’ayarka reer Brazil ee Vinícius Jr uu la mid yahay sida dhamaan ciyaartoyda kale ee ku sugan kooxda Real Madrid.
Macalinka reer Argantina ayaa dhinaca kale tilmaamay in guushii ay kaga gaareen kooxda Valladolid horyaalka La Liga ay ahayd mid aad u adag, kadib markii ay guul waqti dambe ah kaga gaareen 2-0.
“Valladolid waa koox aad u adag, kulanka wuxuu ahaa mid aad u adag, laakiin waxa aan u baahneen ayaa ahaa saddexda dhibcood, waxaan u mooday inaan ku badin karno 7-0, laakiin kubada cagta waxaa jirta xiliyo ay xaalada aad u adag tahay”.
“Waxaan u baahanay kulamada noocan oo kale, waxaan u baahanahay inaan guul gaarno, guushii maanta waxay ahayd mid aad u adag, ciyaartoyda waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed fiican, waana waxa laga doonayay inay sameeyaan, wuxuu ahaa kulan ay ka buuxaan shaqo adag iyo dadaal, hambalyo dhalin yaro”.
“Vinícius Jr da’adiisu waa 18 jir oo kaliya, waa mid ka mid ah kooxda inteeda kale, wuxuu leeyahay faa’iidooyin iyo ceybo, wali waa da’ayar, waxaan u sheegay inuu ku fool jignaado dhanka weerarka iyo difaaca intaba”.
Florentino Pérez oo ka jawaab celiyay eedeeymaha ay kooxda Real Madrid la kulantay xili ciyaareedkan
Arsenal iyo Liverpool oo Bar-baro ku kala baxay....+SAWIRRO